काठमाण्डौका यी ठाउँमा घर बाहिर निस्कन पूर्ण प्रतिबन्ध, केहि ठाउँमा सिल गर्दै प्रहरी ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/काठमाण्डौका यी ठाउँमा घर बाहिर निस्कन पूर्ण प्रतिबन्ध, केहि ठाउँमा सिल गर्दै प्रहरी !
चन्द्रागिरि नगरपालिकाले कोरोना भा`इरसको जो`खिम हुन नदिन क्वारे`न्टाइन निर्माण`लाई प्राथमिक`ता दिएको छ । काठ`माडौँ उपत्य`काको मुख्य प्रवेश`द्वारमा रहेको सो नगरपालिका भित्र कोरोना सङ्क्र`मित बढे`सँगै क्वारेन्टा`इन थ`प गर्न लागेको हो । नगर प्रवक्ता हरिभक्त महर्जनले क्वारेन्टाइनको क्षमता विस्तार गर्न लागि“एको जानका`री दिनुभयो ।
नगरपालि`कामा हाल ४० श्ययाको क्वारेन्टाइन तयारी अवस्थामा गरेको छ । चन्द्रा`गिरि अस्पताल`मा १५ र चुनदेवी माध्यमिक विद्यालय थानकोटमा २५ श्ययाको रहेको छ । नगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्या`लय र मनमोहन अस्पताल दहचोकमा क्वारेन्टाइन विस्तार गर्न लागेको छ ।
हाल चन्द्रागिरिमा कोरोना सङ्क्रमित देखिएका व्यक्तिलाई बलम्बुमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पतालमा उपचार गरिँदै आएको छ । हालसम्म सो नगरपालिकामा पाँचजनालाई कोरोना भाइरस पोजेटिभ पुष्टि भएको जनाइएको छ ।
नगरपा`लिकाले हा`सम्म ४८५ व्यक्तिमा कोरोना परीक्ष`ण गरिसकेको छ । नगरपालि`काभित्र कोरोना सङ्क्र`मितको सङ्ख्या बढेसँगै नगरपालिकालाई यही जेठ ७ गतेसम्म सिल ग`रिएको छ । नगरपालि`का सिल गरेसँगै अत्यावश्यक कामबाहेक घर बाहिर निस्कन पूर्ण प्रतिबन्ध गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा १२० क्षमताको आइसो`लेशन वार्ड स्थापना गरी कोरोना सङ्क्र`मितको उपचार गरिँदै आएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को सङ्क्र`मणको जोखिम हुन नदिन सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि देशभर लक`डाउन जारी गरेको थियो ।
कपनको तेन्जिङ चोक नजिक बसोबास गर्ने १८ वर्षीया युवतीको पिसिआर रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएपछि उक्त क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाइए`को छ । सर्लाहीको रामनगर स्थायी घर भई हाल कपन बसोबास गर्दै आएकी उक्त युवतीमा कोभिड–१९ पोजेटिभ देखिएपछि युवती बसो`बास गर्ने क्षेत्रदेखि १५० मिटर वरपर सिल गरिएको बूढानीलकण्ड नगरपालिकाका प्रवक्ता नवराज भट्ट`राईले जानकारी दिनुभयो ।
पिसिआर परीक्षणमा पोजेटिभ आएसँगै युव`तीलाई शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुको आइसो`लेशनमा राखिएको छ । युवतीका आमा र भाइको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएकोे परिवारले जानकारी दिएको छ । युवतीको परिवारले कपनमा फर्निचर व्यवसाय गर्दै आएको थियो ।
युवतीको रिपोर्टमा पोजेटिभ आएपछि थप सतर्कता अपना`उनका लागि वडा सिल गर्ने तयारी रहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो । भट्टराईका अनुसार, “आज ३ बजे बस्ने नगरपालिकाको बैठकले अब कस`री जाने भन्ने निर्णय गर्नेछ । यसका लागि थप सुरक्षा अपनाउन वडा सिल पनि गर्न सकिनेछ ।” उक्त क्षेत्रमा एक टोलबाट अर्को टोलमा हुने आवतजा`वत रोक्नका `लागि प्रहरी र स्व`यंसेवक परिचालन गरिएको` छ ।
भोलिदेखी फेरि १ महिना देशव्यापी लकडाउनको घोषणा,यी क्षेत्रहरुमा लाग्ने छैन प्रतिबन्ध